Health and Beauty Products :: [ESTÉE LAUDER] Revitalizing Supreme+ Global Anti-Aging Cell
Home/Health and Beauty Products/[ESTÉE LAUDER] Revitalizing Supreme+ Global Anti-Aging Cell
[ESTÉE LAUDER] Revitalizing Supreme+ Global Anti-Aging Cell
Minimum quantity for "[ESTÉE LAUDER] Revitalizing Supreme+ Global Anti-Aging Cell" is 1.
A multi-action eye balm that hydrates, firms, and smooths the look of fine lines.
This richly nourishing eye balm helps dramatically improve visible firmness and elasticity around the eyes while reducing the look of lines, wrinkles, puffiness, and dark circles. Formulated with their powerful RevitaKey™ technology featuring exclusive moringa extract, it leaves the eye are looking radiantly boosted.
Or use asaweekly eye mask: leave on for two minutes then blot excess withatissue.
မနက်တစ်ခါ ညတစ်ခါ အသုံးပြုရုံနှင့် အရွယ်မတိုင်ခင် အိုမင်းရင့်လျော်ခြင်းကို ပျောက်ကင်းစေနိုင်ပြီး သင့်မျက်လုံး နား area မှာရှိတဲ့ အမည်းစက်တွေကိုလည်း ဖယ်ရှားနိုင်ပါတယ်။ eye mask အဖြစ်လုံး တစ်ပတ်တစ်ခါ အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ ၁၀၀% ပစ္စည်းစစ်ကြောင်းအာမခံပြီး အိမ်ရောက်ငွေချေစနစ်ဖြင့် ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်။
မနကျတဈခါ ညတဈခါ အသုံးပွုရုံနှငျ့ အရှယျမတိုငျခငျ အိုမငျးရငျ့လြျောခွငျးကို ပြောကျကငျးစနေိုငျပွီး သငျ့မကျြလုံး နား area မှာရှိတဲ့ အမညျးစကျတှကေိုလညျး ဖယျရှားနိုငျပါတယျ။ eye mask အဖွဈလုံး တဈပတျတဈခါ အသုံးပွုလို့ရပါတယျ။ ၁၀၀% ပစ်စညျးစဈကွောငျးအာမခံပွီး အိမျရောကျငှခေစြေနဈဖွငျ့ ဝယျယူရရှိနိုငျပါတယျ။